🥇 Uhlelo lwezinto zokuhamba
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 472
Ividiyo yohlelo lwezinto zokuhamba
Oda uhlelo lwezinto zokuhamba
Ngabe isicelo samahhala se-logistics siyiqiniso noma akunakwenzeka yini ukuthola okuthile okuzuzisa ngempela mahhala? Sizozama ukuphendula lo mbuzo kulesi sihloko. Impendulo emfushane inguyebo - ingokoqobo. Kepha umbuzo uwukuthi, lolu hlobo lohlelo lusebenza kangakanani, futhi ingabe lusebenza kahle? Ithimba lokuthuthukisa isoftware le-USU Software linikeza impendulo engaqondakali - izinhlobo zedemo kuphela zezinhlelo ezinhle ezingaba mahhala. Izinhlobo ezigcwele zalezo zinhlelo zihlala ziwumkhiqizo okhokhelwayo futhi i-USU Software ayikhethi lokho.
Uhlobo lwedemo lwe-USU Software lubandakanya konke ukusebenza okuyisisekelo okungase kudingeke noma yiliphi ibhizinisi. Kodwa-ke, inguqulo yedemo inesikhathi esilinganiselwe sesilingo ngakho-ke ayifanele i-automation logistics ezenzakalelayo yesikhathi eside. Inhloso yokusatshalaliswa kungenxa yolwazi kuphela. Uhlelo lwethu lungalandwa mahhala futhi ungazijwayeza ngokusebenza kwalo ngokuqhubeka kwamasonto amabili agcwele esikhathi sokulingwa. Ungathola inguqulo yedemo kuwebhusayithi yethu esemthethweni. Ukuze uthenge okufushane umnyuziki, xhumana nethimba labasekeli bezobuchwepheshe usebenzisa ama-requisites angatholakala nakwiwebhusayithi. Yonke imininingwane eningiliziwe mayelana namakhono wohlelo iyatholakala lapho futhi.
Akunangqondo ukusebenzisa izinhlelo zamahhala zezinto zokuhamba. Izinhlelo ezinjengalezi azikwazi ukuqinisekisa ukuqaliswa okugcwele kokuzenzakalela kwayo yonke imisebenzi emi phambi kwebhizinisi elidinga ukuphathwa okunembe kakhulu okudingeka kunoma iyiphi inkampani yezokuthutha kanye nempahla. Isibonelo, uma uthenga uhlelo kusuka kubathuthukisi be-USU Software, uthola ithuba elihle kakhulu lokulandela umsebenzi wenkampani yonke, kanye nomsebenzi ngamunye ngamunye. Lolu hlelo lunokusebenza kokulandela amahora okusebenza kwabasebenzi. Umsebenzi ngamunye owenziwa ngumsebenzi uyarekhodwa. Kanye nesikhathi esichithwe kukho nekhwalithi yomsebenzi ohlinzekiwe.
Uma udinga uhlelo lwezinto zokuhamba, akunangqondo ukuzama nje ukululanda mahhala, kepha ibhizinisi lakho alinazo izabelomali ezinkulu okwamanje, singakunika isisombululo sethu sokwenza izinto zokuhamba, ngentengo ephansi, nokho nge ukuhlukahluka okukhulu kwemisebenzi ewusizo. Isibonelo, ngosizo lwe-USU Software, uzokwazi ukulandelela konke ukulethwa ngesikhathi sangempela. Kepha ukusebenza kohlelo lokuphathwa kwempahla yezokuthutha akugcini lapho.
Idathabheyisi yokusetshenziswa iqukethe imininingwane ebanzi maqondana nokuphathwa kwempahla. Uzokwazi ukufinyelela ngokushesha kulwazi olugcinwe ku-database yohlelo. Isibonelo imininingwane mayelana nomamukeli kanye nomthumeli wepasela, izici zomkhiqizo, ubukhulu bawo, isisindo, njalonjalo. Ngaphezu kwalokho, ungacela inani lempahla, indawo okulethwa kuyo ebalazweni, kanye nosuku lokuthunyelwa.
Uhlelo lokuphathwa kwempahla yezokuthutha, olungalandwa mahhala njengenguqulo yedemo, lunezinzuzo eziningi ngaphezu kwezicelo zamahhala ngokuphelele. Uhlelo olulanda mahhala ngeke likwazi ukuhlinzeka ngaleyo ndlela ngokwemisebenzi i-USU Software ekwaziyo ukuyenza. Ngaphezu kwalokho, ngokwesilinganiso samapharamitha ahlukile njengekhwalithi yamanani, ngisho naphakathi kwezicelo ezingekho mahhala, insiza yethu isabonakala. Uhlelo olusha lwe-accounting logistics accounting oluvela eqenjini le-USU Software luzongena kahle ekwakhiweni kwezinkampani zezokuthutha imithwalo kanye nanoma yimaphi amanye ama-ejensi ezinto.
Izicelo zokuhanjiswa kwezimpahla zamahhala ngeke zikwazi ukulandelela ukuthunyelwa kwezimoto eziningi ngokusebenza kahle. Futhi i-USU Software izowusingatha ngokuphelele umsebenzi wokulandelela umzila wezokuthutha wezimpahla, izinhlobo zokulethwa, futhi uyakwazi ukuwuhlunga ngezokuthutha ezisetshenzisiwe. Uma kukhulunywa ngohlelo lwethu, akunandaba ukuthi inkampani isebenzisa hlobo luni lokuhamba lapho ihambisa izimpahla. Noma ngabe ukuthuthwa komoya, ujantshi, amaloli, imikhumbi, noma ukuthuthwa ngezindlela eziningi - uhlelo lwethu luzosebenza kahle futhi lusheshe ekuqedeni yonke imisebenzi yalo. Ezinye izinto zalolu hlelo ezizosiza ngokuphathwa kwempahla yezokuthutha kunoma yiliphi ibhizinisi zifaka izinzuzo ezifana nokukwazi ukuhlukanisa ezokuthutha nokudiliva ngohlobo, kuya ngosayizi wezimpahla nenani lezimpahla ezikuzo.
Uma inhlangano ingenawo amagatsha amaningi aphesheya kwezilwandle, futhi nomthamo wezimpahla ezithuthwayo ungekhulu kakhulu, kuyadingeka ukuthenga inguqulo yenkampani encane, kuyilapho kunenketho yamabhizinisi ezinto ezinamagatsha emazweni ahlukahlukene. Uhlelo losizo lwezinto zokuhamba ongalulanda mahhala kuphela ngesimo sedemo luzosebenza isikhathi esilinganiselwe.
Izinhlelo zamahhala zokuhlinzeka ngezinto zinikela ngesikhathi esilinganiselwe sokusetshenziswa. Ukuthenga uhlelo olunelayisense lwentengo ngamanani entengo, uthola uhlelo olulungiselelwe ngokuphelele lokuphatha umsebenzi wasehhovisi emkhakheni wokuthuthwa kwempahla nabagibeli. I-USU Software isebenziseka ngezindlela eziningi kangangokuba ilungele ukuzisebenzisela noma iyiphi inkampani ephathekayo.
Lapho uqala ukusebenzisa insiza, uzodinga ukuyibhalisa futhi uyigunyaze ohlelweni. Ngemuva kokungena ngemvume kumsebenzisi unikezwa ukukhetha kwemiklamo eminingi esethiwe, ezobasiza ukuthi benze ngezifiso indawo abasebenza kuyo. Ngemuva kokukhetha izingqikithi zokuklama nokwenza kube ngokwakho, u-opharetha uqhubekela ekukhetheni kokusebenza nezilungiselelo zesixhumi esibonakalayo. Zonke izinguquko zigcinwa ku-akhawunti yomuntu siqu futhi ngesikhathi sokugunyazwa okulandelayo, asikho isidingo sokulungisa yonke into futhi ngokuhamba kwesikhathi. Kumsebenzisi ngamunye, i-akhawunti yakhe uqobo iyadalwa, inezilungiselelo zayo.
Izinhlelo zamahhala azivumelaniswanga nomsebenzi omningi, ngakho-ke kungcono futhi kunenzuzo ukuthenga ngokushesha uhlelo olukhokhelwayo, olusebenza kahle oluzokusiza ukuqedela yonke imisebenzi oyabelwe. Ku-USU Software, yonke imisebenzi ihlelwe ngokulandelana, imininingwane igcinwa kumafolda afanele, lapho kulula khona ukuthola ibhulokhi yolwazi onentshisekelo kulo. Izinhlelo zamahhala zokuphathwa kwempahla ngeke zikusize wenze ukuthunyelwa okuphelele kwezethameli ezihlosiwe ezikhethiwe, kepha uhlelo lwethu lungawenza kalula lo msebenzi. Kwanele nje ukwenza ukukhetha okubhekiswe koxhumana nabo bese uqopha umyalezo. Uhlelo lokusebenza luzokwenza ezinye izenzo ngendlela ezenzakalelayo, okuzonciphisa izindleko eziningi.
Ukuqaliswa nokusetshenziswa kohlelo lwethu kukuvumela ukuthi wehlise inani labasebenzi abadingeka kakhulu ebhizinisini lakho. Ungalanda bese uqala ukusebenzisa uhlelo lwezokuthutha njengamanje, ngaphandle kokuhlehlisa ukwenziwa komsebenzi wehhovisi. Ngokukhokha inani elincane kakhulu lemali ukuthenga i-USU Software, ugcina imali eningi ekugcineni abasebenzi abasebenza ngokweqile.
Uhlelo lwethu lwezokuthutha, ongalulanda mahhala kuwebhusayithi ye-USU Software ngendlela yenguqulo yedemo, inohlelo lwamadivayisi we-modular, olwenza kube lula ukuthi opharetha basebenze nalo. Ungalanda futhi usebenzise uhlelo ngokushesha futhi ngaphandle kwezinkinga. Ukuthenga uhlobo olunelayisense lohlelo lokusebenza, sicela uxhumane nochwepheshe benkampani yethu. Bonke oxhumana nabo babhalwe kuwebhusayithi esemthethweni yenkampani yethu.